Unokuncedakala Xa Ukhokelwa NguYehova uThixo
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI IPidgin yaseSolomon Islands ISepedi ISilozi ISpanish Intetho Yezandla YaseIndia Intetho Yezandla yaseMzantsi Afrika Intetho Yezandla yaseOstreliya Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBassa (saseCameroon) IsiBengali IsiBhulu IsiBicol IsiBoulou IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitumbuka IsiChiyao IsiChuvash IsiCibemba IsiCinyanja IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFon IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiGun IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKabiye IsiKannada IsiKikamba IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKiribati IsiKirundi IsiKorea IsiKurdish Kurmanji (SaseCaucasus) IsiKurdish Kurmanji (sesiCyrillic) IsiKwangali IsiKwanyama IsiLatvia IsiLithuania IsiLuganda IsiLunda IsiLuo IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMambwe-Lungu IsiMarathi IsiMaya IsiMingrelian IsiMongolia IsiMyanmar IsiNdebele IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNdonga IsiNepali IsiNgesi IsiNigerian Pidgin IsiNorway IsiNzema IsiOkpe IsiOromo IsiOssetia IsiPangasina IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTajiki IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTiv IsiTok Pisin IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTurkmen IsiTuvaluan IsiTwi IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUrdu IsiUzbek IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWelsh IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo isiZapotec (saseIsthmus)
ISIGQIBO SOBULUMKO EPOLAND
“NDABHAPTIZWA ndineminyaka eyi-15 ndaza emva kweenyanga ezintandathu ndanguvulindlela ongumncedani. Emva konyaka, ndafaka isicelo sokuba nguvulindlela othe ngxi. Ukuphumelela kwam amabanga aphezulu, ndacela ukuya kukhonza apho kwakufuneka abavakalisi abangakumbi. Ndandifuna ukumka kuloo dolophu ndandihlala kuyo, ndingasafuni nokuhlala nomakhulu wam owayengeloNgqina likaYehova. Ndadana kakhulu xa umveleli wesiphakula wandabela ukuba ndisebenze kwakuloo dolophu ndandihlala kuyo. Ndandingafuni ayibone indlela endandivakalelwa ngayo. Ndidane ndinjalo, ndemka ndaza ndayokuyicingisisa le nto ithethwe ngumveleli. Ndathi kudade endisebenza naye entsimini: ‘Ingathi ndinguYona. Kodwa yena wade waya eNineve. Ngoko nam ndiza kukhonza apho ndabelwe khona.’
“Ndineminyaka emine ngoku ndinguvulindlela kule dolophu yasekhaya yaye ndiyayibona indlela okububulumko ngayo ukuthobela. Ingxaki, yayiyindlela endicinga ngayo. Ndonwabe kakhulu ngoku. Ndiye ndaqhuba izifundo zeBhayibhile ezingama-24 ngenyanga nje enye. Ndimbulela kakhulu uYehova kuba umakhulu wam owayechasa ngoku ndifunda naye iBhayibhile.”
IMIPHUMO ENCUMISAYO EFIJI
Enye inkosikazi yaseFiji, eyayifundelwa iBhayibhile, kwafuneka ikhethe phakathi kokuya endibanweni okanye ukuya ethekweni lomhla wokuzalwa kwesizalwane somyeni wayo. Umyeni wayo wayivumela ukuba iye endibanweni. Le nkosikazi yathi kumyeni wayo iza kuphumela kwelo theko emva kwendibano. Emva kwendibano yabona ukuba kungcono ingayi, kuba ingafuni ukubeka ukholo lwayo esichengeni.
Umyeni wayo wathi kwizalamane zakhe, inkosikazi isaye kwintlanganiso yamaNgqina kodwa iyeza. Zathi xa ziphendula: “Akazokuza, kaloku amaNgqina kaYehova awawubhiyozeli umhla wokuzalwa!” *
Umyeni wakuvuyela ukubona ukuba inkosikazi iye yamela iinkolelo zayo, ibe yenze ngokuvumelana nesazela sayo. Ngenxa yokuthembeka kwayo, ethubeni kwaba lula ukushumayela kumyeni wayo nakwabanye. Waba yintoni umphumo? Umyeni wayo wavuma ukufundelwa iBhayibhile waza waqalisa ukuya kwiintlanganiso nayo.
^ isiqe. 7 Funda inqaku elithi, “Imibuzo Evela Kubafundi” elikwiMboniselo kaDisemba 15, 2001.